Maxaa Ka Jira inay Shirkadda Dahabshiil dooneyso gabi ahaanba inay la wareegto Electriga Hargeisa?!! |
Maxaa Ka Jira inay Shirkadda Dahabshiil dooneyso gabi ahaanba inay la wareegto Electriga Hargeisa?!!
Warar isa soo taraya ayaa sheegaya iney Shirkada weyn ee Dahabshiil Group dooneyso iney gabi ahaanba la wareegto koronta (electricity) ee caasimada Hargeisa. Tani waxey ka dambeeysey ka dib markey bilowdey howl-galo ay dooneyso iney kula wareegto shirkada ALEL oo shidda 60% caasimada Hargeisa. Iyadoo shirkada Dahabshiil ay hore ula wareegtey gabi ahaanba shirkadaha kale ee caasimada sida KAAH iyo Wakaaladii Laydhka ee dowlada oo ay hore ula wareegtey.
Warar isa soo taraya oo laga helay Nootayooyinka ka shaqeeya magaalada Hargeisa, ayaa sheegayaan iney dooneyso iney la wareegto shirka korontada ee ugu weyn oo la yidhaa ALEL, iyadoo awoodii ay mulkiilayaashu lahaayeen kala wareegto (iibsato). Shirkadani ALEL waxey jirtey mudo sanad iyo dhowr bilood ah, iyadoo shidda magaalada boqolkiiba 60 (60%), ka kooban 10 shirkadood oo isku tagey sanadkii 2014 dhamaadkiisii.
Hadii arintani dhabowdo waa arin aad iyo aad u weyn oo waxaa suurtowda iney Dahabshiil Group la wareegi doonaa 90% korontada caasimada Hargeisa.
Hadaba waxa is weydiin leh, hadii ay shirkadani weyn ee Dahabshiil Group la wareegto gabi ahaanba korontada caasimada, saameynta ay ku yeelan karto nolosha shacbi-weynaha dalka, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimada ah ee Hargeisa.
Dahabshiil Group waa shirkad wayn oo ku caan baxdey adeegyo badan oo ay ka mid tahey Xawaalada, Bangiga iyo Isgaadhsiinta Telephone nada, markaasi hadii ay maanta ugu biirto arintani Korontadu oo ay gabi ahaanba la wareegto adeega korontada ee caasimada, saameynta ay ku yeelan karto nolosha qofka muwaadinka ah oo dhinacyo badan saameyn karta, maxey noqon kartaa? Dowlada maanta se jirtaa maxey ugu talo gashey iney ku xakameyso in company kali ahi awood noocani ah uu yeesho isagoo abuuri kara kooto amase waxa loo yaqaano ‘monopoly’.
Waxa mudan in arintani xogteeda la raadiyo oo hadii ay arintani dhab tahay fiiro-gaar ah loo yeesho, loona kuurgalo, waayo wadanka uma fiicna in shirkad kali ahi (Dahabshiil amase kuwa kaleba ha noqotee) iney awood xad-dhaaf ah ku yeeshaan adeegyada joogtada ah ee dalka.
Hadii arintani dhab noqoto, waana sida ay u egtahey e, oo ay Dahabshiil Group la wareegto dhamaan shirkadaha dalka ee korontada, waxey caqabad weyn ku noqon kartaa horumarka guud ee dalka, oo illaha dhaqaale ee wadanku wuxuu ku haboon yahey inaaney cid kaliya gacanta u galin ee loo sinaado muwaadin kasta oo ganacsade ah oo reer Somaliland ah.